Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अमेरिकामा प्राकृतिक ग्यास पाइप चुहिएर श्रृङखलावद्ध विस्फोट, एकको मृत्यु (भिडियोसहित) – Emountain TV
अमेरिकामा प्राकृतिक ग्यास पाइप चुहिएर श्रृङखलावद्ध विस्फोट, एकको मृत्यु (भिडियोसहित)
एजेन्सी, २९ भदौ । अमेरिकाको बोस्टन स्थित म्यासाच्युसेट्स शहरमा प्राकृतिक ग्यास पाइप लाइन चुहिएर ७० पटक श्रृङखलावद्ध विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । केहि व्यक्तिहरु घाइते भएका छन् ।
विस्फोट पछि लागेको आगो नियन्त्रणका लागि ५० वटा वारुणयन्त्र प्रयोग गरिएको थियो । विहिबार लागेको आगो शुक्रबार मात्रै नियन्त्रणमा आएको छ ।
अमेरिकाको बोस्टन स्थित म्यासाचुसेट्समा प्राकृतिक ग्यास पाइप लाइन चुहिएर भएको श्रृङखलावद्ध ७० पटकको विस्फोटमा दर्जनौ घरमा आगो लागि हुदा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । आगोलागि नियन्त्रणको क्रममा केहि घरहरु खालि गराइएको छ । दर्जनौ व्यक्तिहरु घाईते भएका छन् । गम्भिर घाइते १० जनालाई अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना गएिको छ ।
स्थानिय ग्यास र विद्युत कम्पनिले सो क्षेत्रमा ग्यास र विद्युतको आपुर्ति बन्द गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा ५१ हजार ग्यास उपभोक्ता रहेका मध्ये करिब ८ हजार ग्यास प्रयोगकर्ताहरुको लाइन सुरक्षाको कारण दर्शाउदै काटिएको छ । ग्याँस र बिद्युत आपुर्ति बन्दभएपछि उपभोक्ताहरु प्रभावित भएका छन् । संघिय जाँच एजेन्सि एफ बि आई ले यो घट्नाको अनुसन्धान गरेको छ ।
सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखि प्रभावित क्षेत्रका घरहरु खालि गराइएका छन् । ग्यास चुहिन सक्ने संभावित पाइपहरुको जाँच पड्ताल पनि सुरु गरिएको छ । गम्भिर खतरालाई ध्यानमा राखि सुरक्षाको विशेष प्रयास भैरहेको अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विस्फोट र आगलागी प्रभावित क्षेत्रमा २ दिनदेखि विद्युत आपुर्ति बन्द भएपछि मानिसहरु समस्यामा परेका छन् ।
मेथुएन प्रहरी प्रमुख जोसेफ सुलेमानले सो क्षेत्रमा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइएकोले सबैलाई ढुक्क भएर रहन आग्रह गरेका छन् । तर मानिसहरु ग्यास विस्फोट पुन हुने होकि भन्ने आशंकामा आतंकित बनेका छन ।
अमेरिकामा ग्यास पाइप चुहिएर श्रृङखलावद्ध विस्फोट
अमेरिकामा ग्यास पाइप चुहिएर श्रृङखलावद्ध विस्फोट, एकको मृत्यु, १० जना अस्पताल भर्ना
Posted by Mountain Television on Friday, September 14, 2018
सन्तानलाई यातना दिएको आरोपमा अभिभावकलाई जन्मकैदको फैसला
दक्षिण अफ्रिकाको डर्वान शहरमा चर्च भत्किँदा १३को मृत्यु, १६ जना घाईते
लिबियामा दुई हप्तादेखि हिंसा हुँदा २०५ जनाको मृत्यु, विद्रोही पक्षद्वारा कब्जा गर्ने तयारी
भारतमा बिहीवार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदान
बस दुर्घटना हुँदा २८ जनाको मृत्यु, २७ घाइते
भारतमा हावाहुरीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुग्यो
फ्रान्सका उपगृहमन्त्रीद्वारा गिर्जाघरमा लागेको आगो नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने प्रति प्रशंसा
स्थानीय पत्रिकालाई पुलिट्जर पुरस्कार सहित एक लाख अमेरिकी डलर दिने निर्णय
पेरिसमा रहेको ८५० वर्ष भन्दा पुरानो विश्वभर चर्चित चर्चमा आगलागी
सुडानको सैन्य शासनको विरोधमा प्रदर्शन चर्कंदै